Home » အသားပေး » ကို Canon C200: ရုပ်ရှင်ရုံ RAW အလင်း, အဘယ်သူမျှမပြဿနာ!
ကို Canon C200: ရုပ်ရှင်ရုံ RAW အလင်း, အဘယ်သူမျှမပြဿနာ!
အဆိုပါ 4K ရုပ်ရှင်ရုံ RAW အလင်း ထဲမှာပုံစံ ကို Canon C200 ၎င်း၏လွှတ်ပေးရန်ကတည်းကအချို့သောအလွန်ကောင်းတဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပြီး မေလနှောင်းပိုင်း 2017 ။ အဆိုပါရုပ်ရှင်ရုံရော်အလင်း 50-bit မှာမှာ 60-bit နဲ့4/ 10p / 240p 25K မှာ 30p / 4p 12K ထောက်ခံပါတယ်။ အဆိုပါ C200 နှစ်ခု SD ကဒ် slot နှစ်ခုနှင့် 4096 × 2160 မှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေအထောက်အပံ့တစ်ခုတည်း CFast slot ကရှိပါတယ်။ အဆိုပါကုန်ကြမ်း codec ကိုပိုပြီးစီမံခန့်ခွဲဖိုင်အရွယ်အစားနှင့်အတူ HDR ကိုရှာမှီးခြင်းနှင့် Post-ထုတ်လုပ်မှုထောက်ပံ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါတစ်ပြိုင်နက်စံချိန်အင်္ဂါရပ် 4K ဗီဒီယို SD ကဒ်တစ်ခု 2.0K proxy ကိုဗီဒီယိုကပြင်ဆင်ရန်၏လွယ်ကူခြင်းအဘို့အမှတ်တမ်းတင်နေပါသည်တစ် CFast2ကဒ်အပေါ်မှတ်တမ်းတင်နေပါသည်သောအခါအများအတွက်ကောင်းတဲ့ထိတွေ့ပါ!
နှင့် Blackmagic DaVinci ဖြေရှင်းရန် ပြုလုပ်ရန်ဒီပြောင်းလဲနေသော codec ကိုထောက်ပံ့ခြင်းနှင့် Adobe Premiere Pro ကို CC ကို, လွန်စွာလိုလားသော မီဒီယာ Composer (*မှတ်စု: ကို Canon အဘို့အ RAW Plugin ကို 2.0 လွန်စွာလိုလားသော® မီဒီယာ Access ကိုအသုံးပြုသူများကတိုက်ရိုက်တင်သွင်းဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့အခမဲ့ download, အဖြစ်ပံ့ပိုးပေးထားပါသည် ကို Canon တစ်ဦးသို့ရုပ်ရှင်ရုံ RAW ဒေတာ လွန်စွာလိုလားသော မီဒီယာ Composer® စနစ်။ စိတ်ဖိစီးမှု-အခမဲ့ Real-time ပြန်ဖွင့်ကိုဖွင့်ခြင်းနှင့်ဖိုင်စားသုံးမိချောင်းမြောင်းအချိန်လျှော့ချထားစဉ်ဤ), ပုလုပ်ငန်းအသွားအလာချောမွေ့ကူညီပေးသည်နှင့် Apple က FCP X ကို suite ကိုအောက်ပါကြောင့် 4fps မှာကင်မရာရိုက်ကူးခြင်းနဲ့ post ထုတ်လုပ်မှု 60K များအတွက်လန်းဆန်း option ကိုစေသည်! အဆိုပါ C200 box ကို (မှတ်ချက်: မှန်ဘီလူးဖယ်ထုတ်လိုက်) ထဲကအဆင်သင့်အားလုံးတစျခုထုတ်လုပ်မှုကင်မရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, ကအမြင် Finder နှင့် LCD ကို touch panel ကိုမော်နီတာနဲ့ LCD ပူးတွဲမှုယူနစ်, AC adapter, ဘက်ထရီ Pack ကိုနှင့် charger ကို built-in ပါရှိပါတယ်။ အဆိုပါစူပါ 35mm CMOS Sensor ကိုနှင့် Dual-Pixel CMOS AF နည်းပညာအမြင့်ဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှရုပ်ပုံအရည်အသွေးနှင့်တစ်ဦးအလွန်ယုံကြည်စိတ်ချရသောစျေးနှုန်းအမှတ်သေချာ။ သင်တစ်ဦးအထုပ်ရှာနေနေတယ်ဆိုရင်ထို့နောက်မှကြည့်ရှု ကို Canon EOS C200 EF Cinema ကင်မရာနှင့် $ 24 အောက်မှာများအတွက် 105-9,000.00mm မှန်ဘီလူးကိရိယာအစုံကအထက်၏ရှိသမျှနှင့်အတူကြွလာနှင့်ဖန်ထည်အဘို့သင့်လိုအပ်ချက်များကိုဖုံးလွှမ်း။
၏ထောက်ခံမှု ကို Canon တုံး နှင့် ကို Canon log3Gamma အဆိုပါ CMOS image sensor ကို post ကိုထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်နိုင်စွမ်းသော tonal range ကိုမျိုးပွားဖို့ဒီဇိုင်းအဖြစ်, အသုံးပြုသူပိုမိုမြင့်မား dynamic range ကိုပေးကမ်းခြင်း, မီးမောင်းထိုးပြခြင်းနှင့် retention ကိုနှင့်တန်းကျောင်းသူပိုပြီးအကွာအဝေး shadow ဖြစ်ပါတယ်။ ၏အသုံးပြုမှု ကို Canon RAW အလင်းနှင့် RAW ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ software ကို (ဒါ့အပြင်တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ) ကို Canon log2အဆိုပါ cmaera သူ့ဟာသူထဲက dynamic range ကို၏ 15 မှတ်တိုင်များဘို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒါက post ကိုထုတ်လုပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်များအတွက်ကိုက်ညီမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေးဖို့အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအယ်ဒီတာများအဆင်သင့်အောင်နေပါသည်!
အဆိုပါ C200 များအတွက် features တွေတစ် rounded စာရင်းပေးထား:
sensor အရွယ်အစား: စူပါ 35 4096 2160 (အာရုံခံနှုန်းထိရောက်သော pixels) Dual-, DIGIC DV6 တဲ့ image processor နဲ့အတူအာရုံခံ x ။သော့
ပြည်တွင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်ရွေးချယ်စရာ: 10P (12Gbps VBR) အထိမှာရုပ်ရှင်ရုံရော်အလင်း 4bit သို့မဟုတ် 60bit 1K DCI ။ 4P အထိမှာ UHD MP150 60Mbps ။ HD 4: 2: 0P (အဘယ်သူမျှမအာရုံခံသီးနှံ) မှတက်4MP35 120Mbps မှာ။ UHD နှင့် HD in ကို Canon XF-AVC (အနာဂတ် firmware ကို update ကို) ။
ပြင်ပမှတ်တမ်းတင်ရွေးချယ်စရာ: HDMI 2.0 × 3840 ၏ 2160 max ကို resolution ကို။ SDI ထွက် HD 4: 2:210-bit မှာ။
အလေးချိန် (သာခန္ဓာကိုယ်): 1.43Kg (3.2lb), ကင်မရာဆုပ်ကိုင်ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း-V1: Approx.260 ဂရမ် (9.2 အောင်စ။ ), LCD ကို Monitor LM-V1: အနီးစပ်ဆုံး။ 185 ဂရမ် (6.5 အောင်စ။ ) LCD ကိုနှောင်ကြိုးယူနစ် LA က-V1: အနီးစပ်ဆုံး။ 255 ဂရမ် (9.0 အောင်စ။ ), မိုက်ကရိုဖုန်းကိုင်ဆောင်သူယူနစ်: အနီးစပ်ဆုံး။ 50 ဂရမ် (1.8 အောင်စ။ ), ယူနစ် HDU-2 ကိုင်တွယ်: အနီးစပ်ဆုံး။ 220 ဂရမ် (7.8 အောင်စ။ ), hex Socket ဌာနမှူး Bolt က: အနီးစပ်ဆုံး။5ဂရမ် (0.18oz ။ ), ကို BP-A30: အနီးစပ်ဆုံး။ 225 ဂရမ် (7.9 အောင်စ။ ), ယူနစ် Cable ကိုကုလသမဂ္ဂ-5: အနီးစပ်ဆုံး။ 80 ဂရမ် (2.8 အောင်စ။ ), လက်မငြိမ်ဝပ်စွာနေရသော: အနီးစပ်ဆုံး။ 10 ဂရမ် (0.35 အောင်စ။ ), Eyecup: အနီးစပ်ဆုံး။ 25 ဂရမ် (0.88 အောင်စ။ )
မှတ်တမ်းတင်ခြင်းမီဒီယာ: 1x CFast 2.0, 2x SD ကဒ်
မှန်ဘီလူးရှိနေကြပါတယ်: ကို Canon EF mount ။
အဆိုပါ C200 သည်နှင့်အညီ, နှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသော configurations အတွက်ရရှိနိုင် ကို Canon။ အဆိုပါ EOS C200 (ခန့်မှန်းခြေလက်လီစျေးနှုန်း: $ 7,499) built-in OLED EVF အနေနဲ့ LCD ကိုမော်နီတာနှင့်အတူ, ကင်မရာချုပ်ကိုင်ပါဝင်သည်နှင့်အကွက်ထဲမှာယူနစ်ကိုကိုင်တွယ်တဲ့ "ထုတ်လုပ်မှု-အဆင်သင့်" အထုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါပစ္စည်းများမပါဘဲသို့မဟုတ် built-in EVF: တူညီသော system ကိုကင်မရာသာဗားရှင်းသည် EOS C200B ($ 5,999 ခန့်မှန်းလက်လီစျေးနှုန်း) တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါအာရုံစိုက် gimbals နှင့်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များအပေါ်အသုံးပြုမှုအတွက်ပိုပြီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းနှင့်မိုဘိုင်းကင်မရာယူနစ်ချင်သောအသုံးပြုသူများအတွက်ပစ်မှတ်ထားဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးမော်ဒယ်များသြဂုတ်လအတွင်းကတင်ပို့ရန်မျှော်မှန်းထားကြသည်။
ကို Canon ထို့အပြင်ယခင်ကဒီနှစ်နှောင်းပိုင်း Compact-Servo 70-200mm zoom မှန်ဘီလူးရေကြောင်းပြသလိုက်ပါတယ်။ တရားဝင်စျေးနှုန်းကြေညာခဲ့သည် ဒါဟာ $ 5,800 ၏ခန့်မှန်းခြေလက်လီစျေးနှုန်းရပါလိမ့်မယ်။
ကို Canon EOS ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံ: www.usa.canon.com
အေျကာင္းအရာ ကို Canon:
ကို Canon အမေရိကန်နိုင်ငံ, Inc အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်လက်တင်အမေရိကနှင့်ကာရစ်ဘီယံစျေးကွက်မှစားသုံးသူ, စီးပွားရေး-to-စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံရိပ်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဦးဆောင်ပေးသူဖြစ်ပါတယ်။ ကို Canon မှုအတွက်ဖြေရှင်းချက်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုတစ်ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်ပံ့ပိုးပေးသူဖြစ်ပါသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း Imaging (အိုင်တီပစ္စည်းများ, ဖြေရှင်းချက်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများရုံးနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပုံနှိပ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ), စားသုံးသူ Imaging (စားသုံးသူဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယို, printers, စကင်နာ, ဖက်စ်စက်နှင့်စားသုံးသူဘက်စုံသုံး devices များ), ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Imaging (ဒီဂျစ်တယ် radiography နှင့်မျက်လုံးပညာရပ်ဆိုင်ရာ) နှင့် professional က Imaging (ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယို, projector ကို, photofinishing, ကွန်ယက်ကင်မရာများနှင့်ထုတ်လွှင့်ဖြေရှင်းနည်းများ) ။
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော အသံလွှင့်ကုန်တင်ကားအပြင်ဘက်တွင် post ကိုထုတ်လုပ်မှု SoftAtHome, MStar, CES2017 က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2017-07-10
ယခင်: BBQ တက္ကဆက်စတိုင်
နောက်တစ်ခု: ရိုးဗီဒီယိုပေးခဲ့သည် Solutions များအတွက်စွမ်းဆောင်ရည်များနှင့်တတ်နိုင်ဘားပေါ်ပေါက်
ဟေ့လုပ်ပြီး Buddy !, ငါသည်သင်တို့အဘို့ဤအချက်အလက်တွေ့ရှိခဲ့: "ဒီကို Canon C200: ရုပ်ရှင်ရုံ RAW အလင်း, အဘယ်သူမျှမပြဿနာ" ။ http://www.broadcastbeat.com/the-canon-c200-cinema-raw-light-no-problem/: ဒီမှာက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။